भाद्र २२, काठमाडौँ | वैज्ञानिकहरुले एउटा यस्तो क्यामरा तयार गरेका छन् जसका माध्यमद्वारा मानव शरीरका सबै भित्री अंगहरु हेर्न सकिन्छ । डाक्टरहरुले बिरामीको शरीरको भित्री जाँच गर्नका लागि मेडिकल औजार इन्डोस्कोपको प्रयोग गर्दछन् । र, उक्त क्यामरा सोही इन्डोस्कोपीको प्रक्रियामा मद्दतका लागि तयार गरिएको हो । अहिलेसम्म डाक्टरहरुले महँगो स्क्यान र एक्सरे मेसिनको भर पर्नु […]
किबोर्डमा F1 देखि F12 सम्मको बटनको प्रयोग
किबोर्डमा F1 देखि F12 सम्मको बटनको प्रयोग ! दैनिक जीवनमा हामि स्मार्ट फोन र आइ फोनको साथसाथै कम्पुटर र ल्यापटप धेरैनै प्रयोग गर्छौ। कतिपय अवस्थामा हामीसंग कम समय हुन्छ र कम समयमै कम्प्युटरमा धेरै काम गर्नुपर्ने हुन् सक्छ। त्यति बेला हामीले कम्प्युटरमा काम गर्दा देखि सम्मको बटन प्रयोग गरेमा धेरै काम थोरै समयमा फत्ते गर्न […]
काठमाडौं- टेलिकम प्रदायक संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाइ सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। केहीदिनदेखि नेपाल टेलिकम र एनसेलका सिमकार्ड प्रयोग गर्ने अधिकांशको नम्बरमा विदेशी नम्बरबाट मिसकल आउने मिसकल आएपछि कल ब्याक गर्दा मोबाइलमा भएका ब्यालेन्स रित्तिने समस्या आएपछि यस्तो आग्रह गरेका हुन् । नेपाल टेलिकमले यस विषयमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। बिहीबारका दिनपनि धेरैजसोलाई + २१६९८०९०४२७ नम्बरको […]
मोबाइलको ब्याट्रीको चार्ज धेरै समयसम्म टिकाउन अपनाउँनुस् यी उपायहरु ! मोबाइलमा धेरै समय ब्याट्री नटिकेर हैरानु हुनु भएकै होला ।धेरै जसो स्मार्टफोनको प्रयोगकर्ताहरु ब्याट्री नटिक्ने समस्याले गर्दा हैरानीमा हुन्छन । आजकल मोबाईलमा घडि, क्यामरा, रेडियो, एफएम, क्याल्कुलेटर लगायतका कामहरु हुन्छ । तपाईले चलाउनुभएको मोबाइलमा यी कुरा ध्यान दिनुभयो भने मोबाईलको ब्याट्री धेरै समयसम्म टिकाउन सकिन्छ […]
एप्पलको आइफोन सेभेन आयो, केके छन् विशेषता ?
एप्पलले बुधबार अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा एक भव्य समारोहमा बहुप्रतिक्षित आइफोन सेभेन र सेभेन प्लस सार्वजनिक गर्‍यो। यी नयाँ आइफोनको प्रि अर्डर सेप्टेम्बर ९ देखि लिन थालिनेछ भने वितरण सेप्टेम्बर १६ तारिखदेखि हुनेछ। ३२ जिबीको आइफोन सेभेनको मूल्य ६४९ अमेरिकी डलर राखिएको छ भने उत्तिकै जिबीको आइफोन सेभेन प्लसलाई ७६९ डलर मूल्य राखिएको छ। के छ त […]
भाइबरले ल्यायो ५२ वटा मुलुकमा नि:शुल्क फोनको अफर
काठमाडौँ : भाइबरले ५२ वटा मुलुकमा नि:शुल्क फोनको अफर ल्याएको छ। मंगलबारदेखि आउँदो असोज ३ गते सम्मका लागि भाइबरले राति ८ बजे देखि १० बजेको बीचमा निःशुल्क फोन गर्ने अफर ल्याएको हो। यसअघि भाइबरले भूकम्पका बेला पनि नेपालीहरुलाइ निःशुल्क फोन सुविधा दिएको थियो। भाइबरले मोबाइलबाट ल्याण्डलाइनमा फोन गर्दासमेत निःशुल्क हुने जनाएको छ। उसले भनेको छ […]
भाइबरमा म्यासेजलाई पिन राखेर यसरी लुकाउन सकिन्छ
भाद्र ३, २०७३- स्मार्टफोनलाई स्क्रिनमै पासवर्ड राखेर लक गर्न सकिन्छ । फेरि, स्मार्टफोनमा रहेका हरेक एपलाई पासवर्ड राखेर लक गर्न सकिन्छ । अघिल्लो साता म्यासेजिङ एप भाइबरले नयाँ सुविधा सुरु गरेको छ । जसअनुसार प्रयोगकर्ताले आफ्नो भाइबरमा भएको कुनै पनि च्याट (कन्भर्सेसन) लाई पिन राखेर लक गर्न सक्छन् र लुकाउन सक्छन् । संसारभरी नै अहिले […]
निकै चर्चित बनेको ‘पोकमोन गो” कस्तो गेम हो ?
इन्टरनेटमा आजकल “पोकमोन गो” अहिले निकै चर्चित बनेको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक होस् या ट्वीटर जताततै यही गेमको बारेमा चर्चा छ। पोकम्यान गो एक अंगमेटेड रिएलिटी एप हो। यो गेम एप फोनको जिपिएस र क्यामेरामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। कार्टुस सिरिजका फ्यानहरुका लागि पोकम्यान कुनै नौलो नाम होइन। स्मार्टफोन र आइओएस डिभाइसमा पोकम्यान गेम खेल्न सकिन्छ। […]
नेपाल टेलिकमले विपद जोखिमको क्षेत्रमा एसएमएसमार्फत पूर्वसूचना दिने
नेपाल टेलिकमले बाढीको अत्याधिक जोखिम क्षेत्रका रहेका स्थनीयलाई मौसमी प्रभावबारे एसएमएसमार्फत जानकारी गराउने भएको छ। महाकाली, पश्चिम राप्ती, कन्काई, बबई, कर्णाली, नारायणी, बागमती, कोशी नदी क्षेत्र र हिमाली क्षेत्रका ग्राहकहरुको मोबाइलमा विपद् सम्बन्धी पूर्व सूचना सम्प्रेषणको व्यवस्था मिलाइएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ। यस सम्वन्धमा टेलिकम र जल तथा मौसम विज्ञान विभागबीच जल तथा मौसमजन्य विपद् […]
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन महिनाभित्र फोरजी सेवा चलाइसक्ने रोडम्याप बनाए पनि निर्धारित समयमा यो सेवा सुरु नहुने भएको छ। नेपाल टेलिकम र एनसेलले दुई महिनाको समयावधि माग गरेका कारण फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न केही समय लाग्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले जानकारी दिए। रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्य निर्धारण समितिले दुरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा […]
‘नेशनल टेक्नोलोजिकल फेस्टिभल-लोकस २०१६’ : यही असार १७, १८ र १९ गते
१४ असार, २०७३:- काठमाडौं, ‘नविनताको शसक्तीकरण’ भन्ने नाराका साथ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको संस्था लोकसले काठमाडौंमा ३ दिने ‘नेशनल टेक्नोलोजिकल फेस्टिभल-लोकस २०१६’ आयोजना गर्ने भएको छ। सन् २००३ देखि लगातार हुँदै आएको प्रतियोगिता यही असार १७, १८ र १९ गते पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान परिसरमा आयोजना हुनेछ । ३ दिने प्रविधि प्रदर्शनीमा देशभरका विभिन्न […]
सरकारले सुचना प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ प्याकेज ल्याउने तयारी : सञ्चारमन्त्री
९,असार २०७३:- सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले चाँडै नै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारले नयाँ प्याकेज घोषणा गर्न थालेको बताएका छन्। लिभिङ विथ आइसिटी पत्रिकाले राजधानीमा आयोजना गरेको आईसीटी स्टार्टअप अवार्ड २०१६ सम्मान कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री राईले सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकास गर्न र इन्टरनेट सेवालाई विस्तार गर्नका लागि प्याकेज घोषणा गर्न लागेको बताए । ‘केही दिनमा सूचना […]
साउनदेखि चीनबाट इन्टरनेट ल्याउने तयारी:नेपाल टेलिकम
७,असार काठमाडौ- अबको एक महिनाभित्र चीनबाट नेपालमा इन्टरनेट ल्याइने भएको छ। चीनको केरुङ नाका हुँदै नेपाल टेलिकमले इन्टरनेट भित्र्याउन लागेको हो। नेपालले अहिले भारतको बाटो भएर मात्र इन्टरनेट ल्याइने गरिएको छ। केरुङको बाटो हुँदै ल्याइने इन्टरनेटको टेष्ट भइरहेको नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आर्चायले जानकारी दिए। उनले असारभित्रमा सबै काम सकिने र साउनदेखि सो बाटो […]
इतिहास : सन् १९३८: पश्चिमी अर्थतन्त्र ‘भीषण आर्थिक मन्दी’ (The Great Depression:सन् १९२९-१९३९) बाट थलिएर तंग्रिदै थियो र दोस्रो विश्वयुद्द संघारमा थियो । परिस्थिति विषम थियो अर्थोपार्जनको वा कुनै व्यापारको थालनीको लागि । तर ली चुल नामक एक कोरियन नयाँ इतिहास कोर्ने सुरमा थिए । यहि वर्ष उनले सानो कम्पनी खोले सामसुङ्ग नामको तत्कालीन सु-दोङ्ग भन्ने ठाउँँमा । यो स्थानीय कम्पनीमा ४० जना कामदार थिए । त्यो बेला […]
कुनै मोबाइल अपरेटरको सेवामा चित्त नबुझेमा प्रयोगकर्ताले अफूलाई मन परेको अपरेटर रोज्न सक्नेछन्। अपरेटर परिवर्तन गरे पनि प्रयोगकर्ताले पुरानै नम्बर प्रयोग गर्न सक्नेछन्,’ प्रवक्ता अर्यालले भने। विकसित मुलुकमा सञ्चालन हुँदै आएको यो सेवा नेपालमा पनि चाँडै नै प्राधिकरणले ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। नेपालमा मोबाइल अपरेटर परिवर्तन गर्न मिल्ने सुविधा लागू हुने भएको छ। एउटा मोबाइल […]
अब इन्टरनेटबाटै टिभी हेर्न पाइने
इन्टरनेटबाटै जुनसुकै सेटमा पनि टेलिभिजन हेर्न पाइने भएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ। इन्टरनेट प्रोटोकल टेलिभिजन आइर्एपी टिभी संचालनको अनुमति पाएका मध्ये दुई कम्पनीले सेवा सुरु गरिसकेपछि उपभोक्ताले यस्तो सुविधा पाउने भएका हुन्। इन्टरनेट प्रदायक बल्डलिंक कम्युनिकेशन र भायनेटकोसमेत लगानी भएको नेट टिभी स्ट्रिम्ज प्रालि र अर्को ब्रोडलिंक नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेशन प्रालिले आइपी टिभी सुरु […]
इन्टर्नेटका रोचक तथ्यहरु : विश्वमा ४०%ले इन्टर्नेट प्रयोग गर्छन्
तपाइँहरुले यो पोस्ट पनि इन्टर्नेटको माध्यमबाट हेर्दै हुनुहुन्छ । माथिका तथ्यांकहरु यो लेख पोस्ट हुँदा सम्मका हुन् । विश्वमा ४०% मानिसहरुले इन्टर्नेट प्रयोग गर्छन् । विश्वमा १ अर्ब भन्दा बढी वेब साइटहरु छन् । सन् १९९५ मा इन्टर्नेट प्रयोगकर्ता जम्मा १% थिए । सन् १९९९ देखी २०१३ सम्म प्रयोगकर्ता १०% ले बढेका थिए । इन्टर्नेट […]
फेसबुकको केहि जानकारी
फेसबुक अहिले विश्वमै सबैभन्दा धेरै मानिसहरुले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल हो । फेसबुकमा सन् २०१५ को अन्त्य सम्म झन्‍डै १ .५९ अर्ब मासिक सकृय प्रयोगकर्ताहरु रहेका छन् । सामाजिक सञ्जालहरुले मानिसको जीवन जती नै सहज बनाएको छ यसको गलत प्रयोगले समस्या पनि निम्त्याएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको चर्चासँगै यसको प्रायोग दैनिक हुने गर्छ । कतिलाई […]